बदनाम पप्पुलाई ११ अर्बको काम, ठेक्का लिन्छ, अलपत्र पार्छ ! « Postpati – News For All
बदनाम पप्पुलाई ११ अर्बको काम, ठेक्का लिन्छ, अलपत्र पार्छ !
असोज १०, काठमाडौँ । पप्पु कन्स्ट्रक्सन बदनाम छ। देशभरि झन्डै तीन दर्जन पुल जिम्मा लिएको छ । काम भने धेरैतिर अलपत्र पारेको छ। अहिलेसम्म उसले ११ अर्ब रूपैयाँ बराबरका ४० आयोजना ओगटेको छ।
स्थानीय सडकतर्फ २६ वटा पुलको जिम्मा पप्पुले लिएको छ। यसमध्ये १८ वटाको निर्माण अवधि सकिएको छ। तर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन। अन्य आठको निर्माण कार्य समेत सुरु भएको छैन।,यो खबर आजकोअन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।
१० आश्विन २०७५, बुधबार को दिन प्रकाशित